W-Two Worlds ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel July 22, 2016
Main Actor အဖြစ်​နဲ့ မိန်းက​လေး​တွေရဲ့အသည်း​ကျော်​ Lee Jong-suk က ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီး
Main Actress အ​နေနဲ့က​တော့ Han Hyo-joo က ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ ...
ဒီဇာတ်​ကားဟာမထွက်​ရှိ​သေးခင်​ကပင်​ Doctors ,Uncontrollably Fond တို့နှင့်​အတူ
နာမည်​ကြီး ​ရေပန်းစား​နေတဲ့ ကားတစ်​ကားဆိုလဲ မမှားပါဘူး ...
အိုယွန်ဂျူဟာ မြောင်ဆယ် ဆေးရုံရဲ့ ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်မလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး
သူမရဲ့ ဖခင်ဟာ အင်တာနက်​ပေါ်မှ ကာတွန်းရုပ်ပြဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်
သူမရဲ့ ဖခင်ရေးသားနေတဲ့ (W) အင်တာနက်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ဆောင်ရဲ့နာမည်က ဂန်ချောပါ
သူဟာချမ်းသာရုပ်ချောတဲ့ မီလျံနာတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ...
တစ်နေ့မှာ ယွန်ဂျူရဲ့ဖခင် ဟာ ကာတွန်းရေးသားနေလက်စကနေ ပျောက်ဆုံးသွားပီး
ယွန်ဂျူ ဟာ သူမရဲ့ဖခင်​ဖြစ်​သူကို လိုက်လံရှာ​ဖွေ​နေခဲ့ပါတယ် ...
ဖခင်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲပေါ်က ရေးလက်စ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကို စူးစိုက်ကြည့်နေရင်းကနေ
ဇာတ်လမ်းထဲကို သူမကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိသွားပီး ဂန်ချောနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်​ ...
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာနှစ်ခု ကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုး​လေးလဲဖြစ်​ပါတယ်​ ...
သူမရဲ့အဖေရေးသားတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းက ဆက်ဖြစ်နေတာလား ... ?
ယွန်ဂျူနဲ့ ဂန်ချောတို့ တကယ်ဖြစ်သမျှ က ကာတွန်းရုပ်ပြအဖြစ် သရုပ်ပေါ်လာနေတာလား ...?
ဆိုတာ​ကို​တော့ ​အောက်​က Link ​လေးကိုပဲ Download ဆွဲပြီး ကြည့်​ရှုခံစားဖို့ ​မျှော်​လင့်​ပါတယ်​ ...
ဇာတ်အိမ်ဆန်းဆန်းလေးမို့ တခြား Drama ဇာတ်​လမ်း​တွေနဲ့ မတူပဲ
ရသဆန်းဆန်း​​လေးပေးနိုင်​မှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ ကြည့်​ဖြစ်​အောင်​ကြည့်​ဖို့ တိုက်​တွန်းပါရ​စေဗျာ ...
Genre : Fantasy , Melodrama , Romance , Suspense
Translator : Pandora Nova
Encoder : LoL / Pandora Nova
Episode 2(Pcloud Link)
Episode 5(Pcloud Link)
Episode 8(Pcloud Link)
Episode 11(Pcloud Link)
Episode 12 (Pcloud link)
Episode 13 (Mediafire Link)
Episode 14 (Mediafire Link)
Episode 16 ( Final Episode)
Fantasy Korea Melodrama Romance Suspense
Labels: Fantasy Korea Melodrama Romance Suspense
Fan Of Yui Hatano July 23, 2016 at 8:27 PM
I want to watch next episode .Quckily...
Pandora Nova July 23, 2016 at 10:48 PM
Gant Gaw Oo July 27, 2016 at 1:17 AM
Phyo Min Thein July 27, 2016 at 7:48 AM
Epi3lay tin pay pr own😂
Myanmar Asian TV Channel July 27, 2016 at 12:46 PM
kohtet htetnay September 28, 2016 at 9:34 AM
ဟွာယေ ၁၆ထိဆိုတော့ စ/ဆုံး တင်ပီးသွားဘီပေါ့နော့်
Phyo Min Thein July 29, 2016 at 7:48 AM
4tin pay pr own😂
Kyiz chin nay v😂
Htetaung Hlaing August 1, 2016 at 2:32 AM
next ep မြန်မြန်တင်ပေးပါဗျိူ့ အားပေးနေပါတယ်
ei khine August 3, 2016 at 12:53 AM
download ဆွဲလို့မရလို့ပါ pCloud Drive ၀င်ပီးအီးမေးအကောင့်အသစ်လုပ်ပီး download မပေးပါ
သုမွန် August 4, 2016 at 6:21 AM
bomebome August 10, 2016 at 10:33 AM
ကျနော်6ပိုင်းစလုံး download လုပ်လို့ရတယ်. Internet Download Manager နဲ့လုပ်ကြည့်ပါလား
Phyo Min Thein August 3, 2016 at 8:19 PM
Htetaung Hlaing August 4, 2016 at 8:52 PM
Htetaung Hlaing August 4, 2016 at 10:03 PM
ဇတ်လမ်းကတော်တော်ဆွဲဆောင်နေတယ်ဗျ ကြည့်ချင်တယ် တင်ပေးပါဗျိူ့ အပြင်မှာလည်းဝယ်လို့ရဘူး
Htetaung Hlaing August 4, 2016 at 10:05 PM
Peter Mgk August 4, 2016 at 11:01 PM
Htetaung Hlaing August 5, 2016 at 1:15 AM
http://kdramasub.com/w-two-worlds-episode-6-english-sub အဲမှာဒေါင်းလို့ရတယ် IDM နဲ့ eng sub . အဲကားက ဗုဒွဘူးနဲ့ ကြာသာပတေး မှ နောက် ep တင်တာထင်တယ် ...
MgMg Lat August 5, 2016 at 9:55 AM
Thaw Dar August 8, 2016 at 2:20 AM
Doctor Stranger ဆိုတဲ့ကားလေး တင်ပေးပါလား အပိုင်း၂၀ ပါတယ်တဲ့အဒီမင်းသားပဲသရုပ်ဆောင်ထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Thiri Myat Thu August 9, 2016 at 12:08 AM
PCloud နဲ့ မဟုတ်ဘဲ တခြားဟာနဲ့ ဒေါင်းလို့ရအောင် လုပ်ပေးပါ
nay lin August 9, 2016 at 2:58 AM
Episode7တင်ပေးပါတော့
episode 8 တင်ပေးပါတော့
sweetycat August 16, 2016 at 12:19 AM
Save this file in your pCloud Account in order to use it. အဲ့လိုပဲပြနေတယ်.... ဘယ်လိုဆွဲရမလဲ ...dropbox နဲ့တင်ပေးလို့ရမလားရှင့် ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
thae thae August 17, 2016 at 2:44 AM
episode 8 ဘယ်တော့တင်မလဲရှင် ?
htet htet August 18, 2016 at 6:33 AM
Episode 8 i wanna waich pls admin 😉😉😉
shweyee win August 18, 2016 at 11:39 PM
nay lin August 19, 2016 at 8:04 PM
nay lin August 24, 2016 at 12:37 AM
Kimjun Hee August 20, 2016 at 1:25 AM
Pwint Phyu August 26, 2016 at 2:40 AM
Inzali Naing August 26, 2016 at 9:47 AM
Down loh ma ya tot vuu... Why why!!!!
Inzali Naing August 26, 2016 at 9:48 AM
Ye Naing August 29, 2016 at 7:07 AM
Bad BãđGûÿ August 29, 2016 at 11:32 PM
a sone hti tim pay per lar jarr .. wait ya ter sent ta ngin ngin nae :(
Bad BãđGûÿ August 29, 2016 at 11:36 PM
Htetaung Hlaing August 31, 2016 at 7:41 PM
thiri thaw September 2, 2016 at 4:47 AM
13 htwet nay p..tin pay prr ohm lohhhh...plssss
Louisa September 2, 2016 at 8:27 AM
:( Once again, I'm requesting you. Could you please upload Media Fire link? I'd really appreciate if you do. I just can't download with pcloud on my device. It takesalong time as well. Admin-nim, please. And, god bless you.
goodboylay September 2, 2016 at 8:23 PM
ye htutnaung.nn September 4, 2016 at 10:10 AM
၁၃ နောက်အပိုင်းလေးတေရရင်လည်း မြန်မြန်သာ တင်ပေးပါဦးဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Aung San Win September 6, 2016 at 5:23 AM
Kimjun Hee September 7, 2016 at 7:31 PM
zin thu September 10, 2016 at 11:39 PM
goodboylay September 13, 2016 at 11:47 PM
Waiting final episode(16)...Thank Actmin.
Kimjun Hee September 14, 2016 at 8:25 PM
Witt Hmone September 16, 2016 at 9:30 PM
16 ကဆွဲလို့မရဘူး pcloud ထဲလည်း ၀င်​မရဘူးဖြစ်​​နေတယ်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ
Moe Thonn Phyo September 27, 2016 at 8:38 PM
kohtet htetnay September 28, 2016 at 9:26 AM
ဒီကားက အပိုင်းဘယ်လောက်မှာပီးတာလဲ ခဗျ
GCM Phyo Zaw November 25, 2016 at 11:35 PM
16ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျာ နောက်တခေါက်လောက် တင်ပေးပါလား
Future Sky November 29, 2016 at 11:33 PM
ကျေးဇူးပါဘဲ အစ်ကိုတို့ ရယ် W-two Worlds အပိုင်း ၁၆ လင့်လေး ပြန်ချိတ်ပေးပါအုံး
nayminkoko.blogspot.com December 1, 2016 at 5:58 PM
Episode 16 လေးပြန်စစ်ပေးပါဦးခင်ဗျ
nayminkoko.blogspot.com December 1, 2016 at 6:04 PM
Episode 16 လေးပြန်စစ်ပေးပါဦးခင်ဗျ
khukhulay lay December 2, 2016 at 11:32 AM
Aye Sabae December 26, 2016 at 3:57 AM
Episode 16 လေးပြန်စစ်ပေးပါဦးနော် Download လုပ်လို့မရလို့။
Future Sky December 26, 2016 at 4:03 AM
Episode 16 လင့်လေး ပြန်ချိတ်ပေးအုံးအစ်ကို။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ဆက်လက်အားပေးနေပါတယ်။
Lightof Heaven January 1, 2017 at 1:14 AM
Episode 16 link လေးပြန်ချိတ်ပေးပါဦး
daylavi chan January 9, 2017 at 6:14 PM
Don Quixote January 23, 2017 at 10:00 PM
Ep-16 Download Link
Credit : http://mmtvmovieplus.blogspot.com/2016/11/w-two-worlds-tv-series.html
saionmurngangkhur February 12, 2017 at 3:40 AM
16 cannot donload. please
saionmurngangkhur February 12, 2017 at 3:42 AM
16 no file.
Rai Rai Lay March 8, 2017 at 4:54 AM
16 ပြန်တင်ပေးပါလား လင့်သေနေလို့ပါ ကျေးဇူးပြုပြီး
May Thinzar April 2, 2017 at 9:11 AM
Ep 16 link lay pyan tin pay par lar